Dowladda Soomaaliya oo u tacsiyeesey dowladda Lubnaan iyo shacabkeeda | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Dowladda Soomaaliya oo u tacsiyeesey dowladda Lubnaan iyo shacabkeeda
Dowladda Soomaaliya oo u tacsiyeesey dowladda Lubnaan iyo shacabkeeda
Siihayaha xilka ra’iiisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo xiriir telefoon la sameeyay ra’iisul wasaaraha Lubnaan Xasan Diyaab ayaa uga tacsiyeeyay dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaalada Bayruut.
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in dhibaatada gaartay reer Lubnaan ay la xannuunsayaan bulshada iyo dowladda Soomaaliya, sidaas awgeed ay garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda dalkaas oo xaalad murugo ku jira.
Qoraal lagu daabacay bogga xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xiriirka siihayaha ra’iisul wasaaraha uu la sameeyay wasiirka koowaad ee Lubnaan uu ka dambeeyay kadib markii qaraxyo dad ku dhaw boqol ruux ku dhinteen ay ka dhaceen magaalada Bayruut, halka ay ku dhaawacmeen dad kor u dhaafaya Saddex kun oo ruux.
Lubnaan iyo Soomaaliya waxa ay xubno ka yihiin Ururka Jaamacadda Carabta, waxa ay sidoo kale xubno wanaag ka yihiin Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) iyo Qaramada Midoobay oo matalaad ku kala leeyihiin.
Dalka Lubnaan ayaa galay xaalad musiibo, kadib markii qaraxyo ka dhashay ammonium nitrate ku keydsaneed bakhaaro ku yaalla Dekedda dalkaas labo qarax sameeyeen, sida uu warbaahinta u sheegay madaxweynaha dalkaas Michel Aoun.
Isbitaallada waxaa jiifo dad la xannuunsanaya dhaawacyo kala duwan oo kasoo gaaray qaraxyada, halka dadka hilibkooda la helay ee dhintay la geliyay qaboojiyaal lagu sii heynayo muddo aysan cayimin dowladda.